हत्केलामा यस्तो चिन्ह भएका व्यक्तिलाई मानिन्छ ‘भगवानका सन्तान’, हुन्छन् असाध्यै भाग्यमानी – Sandesh Press
काठमाडौँ । हातका रेखाले पनि हाम्रोबारे धेरै कुरा बोल्छन्। ‘हस्तरेखा शास्त्र’का अनुसार हतकेला, पञ्जा र औंलाले हाम्रो भविश्यबारे धेरै संकेत दिन्छन् । यसले हाम्रो स्वभावको बारेमा पनि धेरै कुरा बताउँछन्, साथै हाम्रो भविश्य कस्तो छ भन्ने पनि यसबाट थाहा पाउन सकिन्छ ।
Prevयस समयमा गर्भमा आएका बच्चा हुन्छन् निकै भाग्यशाली, कुन हो त त्यो समय ?
Nextबिहेको भोलिपल्ट महिनावारी भएपछी श्रीमानसँग सुत्न रोक लगाइयो स्वस्तिमालाई अझै याद छ त्यो पल(भिडियो हेर्नुहोस)
‘पंकजले मसंग ३ पटक सिन्दुर पोते गरेको हो’ भन्दै प्रिन्जु पुगीन् पंकजकै घर..? (भिडियो हेर्नुस्)